News - Diyaargarowga rakibida unugga
5kw naaftada genset
5kw Qalabka Mashiinka Alxanka
Furan Nooca Meegaarka
Nooca Xanaaqa aamusnaanta
Dabiiciga Gaas dhaliyaha
Qaybo ka mid ah dayactir loogu talagalay Qalabka Generator
Biyaha macaan ee Genset
Isku dar Qaboojinta, Kuleylka iyo Nidaamka Awoodda
Diyaargarowga rakibida unugga
Gacan ku haynta waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan xarig qaadista waa in lagu xiraa meesha ugu habboon, si qafiif ah u laalaadda. Marka cutubka loo qaado goobta loo socdo, waa in lagu rido bakhaarka inta suurtogalka ah. Haddii aysan jirin bakhaar lagu kaydin karo hawada furan, haanta shidaalka waa in la fujiyaa meel sare si looga hortago duulaanka roobka iyo qoyan. Sanduuqa waa in lagu daboolaa teendho roobka ka ilaalinaysa si looga ilaaliyo qorraxda iyo roobku inay waxyeeleeyaan qalabka.
Maaddaama mugga weyn iyo culeyska culus ee unugga, dariiqa wax lagu qabanayo waa in la hagaajiyaa ka hor inta aan la rakibin, dekedda wax qabadkuna waa in lagu hayaa qolka mashiinka. Haddii albaabbada iyo Windows-ku aysan weyneyn, meesha ay ku yaalliin albaabbada iyo Windows-ku waxaa loo habeyn karaa deked weyn oo wax lagu maareeyo. Ka dib marka cutubku u soo guuro, derbiyada iyo albaabbada iyo Windows dib ayaa loo rakibi karaa.
Boorka waa in la sifeeyaa ka hor inta uusan furin sanduuqa si loo hubiyo in sanduuqa waxyeello gaadhay iyo in kale. Hubi lambarka kiiska iyo tirada. Waxyeello u geysan mashiinka markaad fureyso kiiska. Amarka furitaanka sanduuqa ayaa ah in la laalo saxanka kore marka hore, ka dibna laga saaro saxanka dhinaciisa. Furitaanka kadib, shaqada soo socota waa in laqabtaa:
(1) Hubi dhammaan unugyada iyo agabyada sida ku xusan liiska unugyada iyo liiska xirmooyinka;
(2) Hubi in cabbirrada waaweyn ee cutubka iyo qalabku ay waafaqsan yihiin sawirrada;
(3) Hubi in cutubka iyo qalabku ay waxyeello gaadheen ama ay daxaladeen;
(4) Haddii cutubka aan lagu rakibi karin waqtiga kormeerka ka dib, dusha sare ee qaybaha la kala furfuray waa in dib loogu soo celiyaa saliid-miridhku si loogu ilaaliyo. Qeybta gudbinta iyo qeybta isdabajoogga ee cutubka, ha meerto ka hor inta aan lagaa saarin saliida anti-miridhku. f saliida anti-miridhku waa laga saaray baaritaanka kadib, saliida ladagaalanka miridhku waa in dib loo mariyaa baaritaanka ka dib.
Furitaanka ka dib cutubku waa inuu fiiro gaar ah u yeeshaa keydinta, waa in loo dhigaa si siman, flange iyo isweydaarsiyo kala duwan waa in la xiraa, faashad, ka hortagga roobka iyo dambas ciidda.
3. Meeleyn Adag
Khadadka tixraaca toosan iyo toosan ee barta rakibida cutubka waa in lagu xadido iyadoo loo eegayo cabirka xiriirka ka dhexeeya cutubka iyo bartamaha darbiga ama tiirka iyo inta udhaxeysa cutubka iyo cutubka sida ku calaamadeysan qorshaha qaabeynta cutubka. Kala leexashada la oggol yahay ee u dhexeysa xarunta cutubka iyo gidaarka ama xarunta tiirarka waa 20mm, iyo leexashada la oggol yahay ee u dhexeysa unugga iyo cutubku waa 10mm.
4. Hubi qalabka lagu rakibo
Hubi qalabka, faham fahamka naqshadda iyo sawirada dhismaha, u diyaari qalabka sida ay u baahan yihiin sawirada naqshadeynta, una dir qalabka dhismaha isku xigxig sida ku xusan qorshaha dhismaha.
Haddii aysan jirin sawir gacmeed, waa inay tixraacaan buuga, iyo iyadoo la raacayo isticmaalka qalabka iyo shuruudaha rakibida, iyadoo la tixgelinayo isha biyaha, korontada, dayactirka iyo isticmaalka, go'aaminta cabbirka iyo goobta diyaaradda madaniga ah, sawiro qorshaha qaabeynta cutubka
5. Diyaarinta qalabka huurinta iyo qalabka rakibaadda
Waqtiga dhejinta: Apr-14-2021
Waa maxay sababta qiiqa dhinta ...
Noocyada dhaliyaha naaftada ayaa laga yaabaa inay qiiqa sii daayaan inta ay shaqeynayaan. Midabada kala duwan ee qiiqu waxay u taagan yihiin cilado kala duwan. Haddii qiiqa dejiyaha naaftada aan waqti lagu qaban, waxay sababi kartaa fashilaad go'an soo saaraha naaftada ama xitaa inuu ku guuldareysto inuu bilaabo. Waa kuwan qaar ka mid ah xaaladda qiiqa ...
Land 3, Beerta Warshadaha, Huanxi Town, Degmada Jin'an, Fuzhou, Fujian, Shiinaha